I-RM PHYSIO • Ukuhlikihla umzimba ne-NuRu Massage
Ngabe othandekayo wakho uphila nesifo esingelapheki, uyalulama ekuguleni, noma umane nje udinga usizo lwansuku zonke? Ungabe usasesha njengoba sinezingcweti zokuletha ikhambi eliqondile elifanele izidingo zakho zokwelashwa eziqondile. Ngezinhloso zemfundo, Nuru ukubhucungwa idume ngabo bonke njengoba kunamasseuse amangalisayo ezocansi lapho. Umuntu angahlela i-nuru eMiami, FL ngaphandle kokunikeza umcabango wesibili. I-Nuru massage inikezwa ngabesifazane emhlabeni wonke. IMiami itholakala eSouth Florida, eyiPharadesi uqobo lwayo. Ngaphezu kwalokho ubumnandi abupheli ku-nuru, kunokunye okuningi kufaka phakathi amahora ajabulisayo futhi kukuyisa kwelinye izwe. UNuru uyi massage eerotic inqubo. Ukubhucungwa kunikezwa ngamasisi aqeqeshiwe. AmaMasseuse kungabesilisa noma abesifazane futhi ayathandeka. Inqubo yokuhlikihla yeNuru ivela edolobheni laseKawasaki (eJapan). Imvamisa, eminye imikhiqizo kawoyela noma yejel isetshenziswa emsebenzini wokusikhipha ophethe uhlobo oluthile lwenyanyeko lwephunga, ukunambitheka, futhi kwesinye isikhathi okusawolintshi okuphuzi noma okukhanyayo ngombala. Ngenkathi ulapha eNuru kunejeli esetshenziselwa okufanayo ayinambala ngokuphelele, ayinambitheki futhi ayinaphunga. Njengoba i-Nuru iwuhlobo lokuthambisa oluthinta inkanuko, kudinga ukuthi umuntu oyedwa noma ngaphezulu abhucabhuce imizimba yabo emzimbeni weklayenti. Ngalokhu, zombili izinhlangothi zinqunu futhi zimbozwe nge-massage lotion. Igama le-Nuru livela olimini lwesiJapane nencazelo ebushelelezi. Ngalesi sikhathi umhlanganyeli we-nuru massage uthola ukuxhumana okubanzi kakhulu emzimbeni kamasseuse. Futhi, obhucungayo ayikwenqabeli ukuthintana nomzimba ngezinto ezivusa inkanuko ngokugcwele. Ijeli le-nuru yi-polysaccharide enesibabule fucoidan, ekhishwa emaqabungeni esitshalo esinsundu sotshani lwasolwandle iSphaerotrichia sehlukanisa. I-RMPhysio iphethwe nguRaul Mosqueira (RM), onesipiliyoni esingaphezu kweminyaka eyishumi, eqinisekisiwe ngokubhucungwa ngo-2008. Uyaziqhenya ngokuhlangenwe nakho okukhulu kuma-spas ezempilo, kuma-Chiropractors, nangokusebenzisana nabanikezeli bezempilo abahlukahlukene. Isazi senkambiso yangasese egxile ku:
I-massage ye-tissue ejulile
Ukubhucungwa isisu ngempilo yabesifazane
Ukwelashwa kwe-Neuromuscular eMiami.
Ukukhishwa Kwe-Myofascial eMiami
Ukukhululwa kwe-Myofascial uhlobo lokwelashwa ngokomzimba okuvame ukusetshenziswa ngabelaphi ukwelapha i-myofascial pain syndrome. I-Myofascial pain syndrome isifo esibuhlungu esingapheli esibangelwa ukuzwela nokuqina kwezicubu zakho ze-myofascial ezingakhululeka kalula i-mass massage abelaphi. Lezi zicubu zizungeze futhi zisekele imisipha emzimbeni wakho wonke futhi ubuhlungu buvame ukuvela emaphuzu athile ngaphakathi kwezicubu zakho ze-myofascial ezibizwa nge- "trigger points."
Ukukhululwa kwe-myofascial okunikezwe yi-massage Therapist eMiami kugxile ekwehliseni ubuhlungu ngokunciphisa izingqinamba nokuqina ezindaweni zokubamba. Uchwepheshe wakho uzobhucunga ngobumnene iMyofascia futhi azizwe ngezindawo eziqinile noma eziqinisiwe. Uchwepheshe we-massage uzoqala ukubhucunga nokwelula izindawo ezizizwa ziqinile ngengcindezi yokukhanya elula bese usiza izicubu nomgodla osekelayo ekukhipheni ingcindezi nokuqina. Le nqubo iphindaphindwa kaninginingi ngudokotela endaweni efanayo yokubangela nakwamanye amaphuzu okuqala kuze kube yilapho umelaphi ezwa ukuthi ukungezwani sekukhishwe ngokuphelele.
Ukukhishwa Okujabulisayo Kokuphela Komzimba eMiami. Ukukhishwa kwe-Myospinal kugxile ekukhipheni i-spasm yemisipha emgogodleni kufaka phakathi imisipha engaphansi kwe-occipital (imisipha engaphansi kwe-cranium). Imisipha eminingi emikhulu kunayo yonke, inamathele emgogodleni. Imisipha engaphezu kuka-700 yakha u-2/3 wesisindo somzimba.
Inhloso yokukhishwa kwe-Myospinal ukuvikela ubuchopho nomgogodla owenza uhlelo lwezinzwa. Ngokuya ngesisekelo sokuthi izinqubo ze-nerve ne-endocrine (hormonal) zilawula yonke imisebenzi emzimbeni, ihlose ukukhipha imisipha ye-muscle lokho kungadala ukuphazamiseka ekusebenzeni kwalezi zinhlelo ezibalulekile. Ukukhishwa kwe-Myospinal kusebenzisa izinsimbi zomculo ezimnene, ezingezona ezokuhlasela kanye nezindlela zokubamba izandla ukusiza umzimba ukuthi ukhulule i-para-vertebral muscle spasm engapheli, ikhulule uhlelo lwezinzwa ukuqinisekisa ukudluliswa nokusebenza okuphezulu. Umelaphi we-Massage eMiami uthatha imizuzu eyi-10 ukukhipha ubuhlungu.
The ukuzilolonga kwezemidlalo empeleni kwavela kunqubo yokuhlikihla yaseSweden eyamukelwa futhi yenziwa ngabelaphi be-massage eMiami.
Ukubhucungwa kwezemidlalo kungenye yezindlela zokubhucungwa eziyintandokazi ngaso sonke isikhathi kubantu abathanda ezemidlalo. Uma ungumthandi wokuzivocavoca kunokuba kufanele ucabangele ngokuqinile ukwelashwa kokubhucungwa njengengxenye yendlela yokuphila jikelele. Le yindlela enhle yokufaka ukukhululeka kwengcindezi ohlelweni lwakho lokuzivocavoca. Kulolu hlobo umelaphi empeleni unikeza inhlanganisela yamasu ahlukahlukene ahlukahlukene. Kulezi zicubu zomzimba ezijulile zikhipha uketshezi nokuqina ngaphakathi kwezicubu ezijulile. Imiphumela ivame ukubambezeleka, kepha ngakusasa umuzwa jikelele jikelele uthuthuke kakhulu. Izinzuzo zokuthatha ukusikwa kwezemidlalo ngumelaphi eMiami zimi kanje:
Ukujikeleza kwegazi okuthuthukisiwe kanye nokudla okuvamile kwemisipha. Ububanzi obuthuthukisiwe bokunyakaza nokuguquguquka kwemisipha. Isiza ukunciphisa isikhathi sokutakula phakathi kokuzivocavoca.
I-Reflexology massage eMiami futhi kuyintokozo enkulu. Ochwepheshe bemassage lapha eMiami banomusa kakhulu ngokunikeza lolu hlobo lokumasaja. I-Reflexology yaziwa nangokuthi ukwelashwa kwendawo. Luhlobo oluthile olufana nokusikwa kwe-nuru kepha ngaphandle kokubandakanya uwoyela noma ijeli. Kususelwa ohlelweni lwe-pseudoscientific system lwezindawo nezindawo ezinengqondo ezibonisa isithombe somzimba ezinyaweni nasezandleni ngudokotela onombono wokuthi lowo msebenzi uletha ushintsho emzimbeni emzimbeni. Ngobuhlungu nokuzwela ezinyaweni, ezithendeni, nasezindaweni zethole, qiniseka ukuthi uxhumana namazinga akho obuhlungu nodokotela wakho ngesikhathi sokwelapha kwakho ukuphumula okungcono.
2911 Bridgeport Ave, Miami, FL 33133, e-USA